छोरीलाई पढाउन एमालेको वडा अध्यक्ष उम्मेदवार दिनेशको गुपचुप चलखेल « News24 : Premium News Channel
छोरीलाई पढाउन एमालेको वडा अध्यक्ष उम्मेदवार दिनेशको गुपचुप चलखेल
काठमाडौं । माप्य दूधकोशी गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको वडा नं. ६ मा नेकपा (एमाले)बाट वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका दिनेश कुमार राईले आफ्नो छोरीको अध्ययनका लागि स्पोन्सर जुटाउन वाकु स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन समितिलाई सुटुक्क निर्णय गराएको पाइएको छ । राईले आफ्नो छोरीको अध्ययनका लागि हालसम्म २० लाख रुपैयाँ लागेको बताउँदै आएको भएपनि उनले एक्सन फर नेपालको सहयोगमा छोरीलाई अध्ययन गराउनका लागि स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन समितिमा सुटुक्क निर्णय गराएको पाइएको हो ।
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष आफैं रहेका राईले २०७५ बैशाख १५ गतेका दिन समितिको बैठक बोलाइ यस्तो निर्णय गराएका हुन् । निर्णय पुस्तिाकाको पाना नं. ७४ मा रहेको लिखित निर्णयलाई हेर्दा त्यही एउटा निर्णयका लागि मात्रै बैठक आयोजना गरिएको देखिन्छ ।
निर्णयमा लेखिएको छ, ‘प्रस्ताव नं. १ माथि छलफल गर्दा वाकु स्वास्थ्य चौकीको लागि साथै साविकको वाकु गा.वि.स. मा स्टाफ नर्सको आवश्यकता महसुस गरि एकसन फर नेपाललाई सहयोगको लागि अनुरोध गरि अध्ययनका लागि यसै गा.वि.स. निवासी पढ्न इच्छा राख्ने श्री सोनी खालिङ राईलाई छनोट गरि सिफारिस गरिदिने सर्वसम्मत निर्णय पारित गरियो ।’
यस दिनको बैठकले यही एउटा मात्रै निर्णय गरेर बैठक समापन भएको छ । कुनै प्रतिस्पर्धा वा कुनै मापदण्डबिना नै दिनेश कुमार राईले स्टाफ नर्स अध्ययन गराउनका लागि आफ्नो छोरीलाई छनौट गरेको स्पष्ट भएको छ । वाकु स्वास्थ्य चौकीलाई आवश्यक स्टाफ नर्स उत्पादन गर्ने उद्देश्यले उनको छोरीलाई अध्ययन गराउनका लागि सहयोगी संस्थासमक्ष सिफारिस गरेको देखिए पनि हालसम्म उक्त स्वास्थ्य चौकीमा सोनी खालिङ राई कार्यरत छैनन् ।
दिनेश कुमार राई २०७४ को असार १४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा माप्य दूधकोशी गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको वडा नं. ६ को अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेला उनि नेकपा (एमाले)बाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेर वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
तत्कालीन समयमा श्री सगरमाथा माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेका राईविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । ०७४ को निर्वाचन सम्मुखमा एमालेबाट गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट नपाएपछि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेलगत्तै राईले वडा अध्यक्षको टिकट पाएका थिए ।
२०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न हुन लागेको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट टिकट नपाउने छाँट देखिएपछि उनी फेरि एमालेमा फर्किसकेका छन् । एमालेमा प्रवेश गरेलगत्तै उनी पुनः वडा अध्यक्षको लागि उम्मेद्वार बनेका छन् । उनले केही समयअघि मात्रै एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।